Xaaladda Islii oo Dagan iyo Gaarisa oo Qasan
Xiisadda xaafadda Islii ayaa dagan, laakiin dhinaca magaalada Gaarisa ayaa xaaladeedu kacsan tahay kadib markii 3 askari la dilay. Militariga ayaa dadka xirxiraya iyadoo o uu dab qabsaday Suuqa Gaarisa.
Rabshaddo u dhaxeeya dhalinyaro careysan iyo Soomaalida Easleigh ayaa maanta ilaa xalay ka dhacayay halkaasi. Ugu yaraan 2 qof oo Soomaali ah ayaa dhintay, halka la boobay dhowr goobaha ganacsiga ay leeyihiin Soomaalidu.
Dhinaca kale xiisad cakiran ayaa ka taagan magaalada Gaarisa kadib dil maanta loo geystay 3 askari. Ciidamo ka socda militariga Kenya ayaa gudaha u galay magaalada Gaarisa, waxayna bilaabeen howlgallo ay dad badan ku qab-qabteen.
Cabsi ayaa ka jirta magaalada Gaarisaa. Dhanka kale waxaa dab qabsaday suuqa weyn ee magaalada Gaarisa, lama oga khasaaraha rasmiga ah ee dabkaasi dhaliyay.
Dhageyso wararkii u Danbeeyey ee Gaarissa
Dhageyso warbixinta Islii iyo Wareysiga Faarax Macalin